My Freakonomics - Ku Badbaadso Miisaaniyaddaada Mushahar Wanaagsan | Martech Zone
My Freakonomics - Keydso Miisaaniyaddaada Mushahar Wanaagsan
Talaado, July 25, 2006 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhameeyay aqrinta Fajiciyadaha. Muddo ayaa laga joogaa markii aan dhigi kari waayey buug ganacsi. Waxaan iibsaday buuggan habeenkii Sabtida waxaanan bilaabay akhrintiisa Axadda. Waxaan dhameeyay daqiiqado kahor. Waxaan qirayaa inay xitaa iga qaadatay qaar ka mid ah subaxnimadaydii, taasoo iga dhigtay inaan shaqada ka daaho. Buuggan xuddunta u ah waa aragtida u gaarka ah taas Steven D. Levitt qaadataa markuu falanqeeyo xaaladaha.
Waxa iga maqan xagga sirdoonka, higgaadinta iyo naxwaha - aad ayaan ugu kalsoonahay isku dayga ah inaan dhibaatada ka eego dhinac kasta ka hor inta aanan ku talin xalka. Waqtiyo aan badnayn, qof kale ayaa si dhab ah u furaya xalka saxda ah sida aan ugu xoqay macluumaad badan iyo ka badan. Laga soo bilaabo yaraantiisii, aabbahay wuxuu i baray inay tahay wax lagu farxo in wax walba loo fiirsado sidii xujo halkii shaqada laga ahaan lahaa. Khalad ahaan mararka qaarkood, waa sida aan ugu wajaho shaqadeyda ah Maareeyaha Alaabta Software-ka. 'Caqliga Caadiga ah' wuxuu umuuqdaa xigmada gudaha ee shirkadaheena. Inta badan, dadka 'waxay u maleynayaan' inay yaqaanaan waxa macaamiisha ay rabaan waxayna isku dayaan inay horumariyaan xalka saxda ah. Kooxda aan hadda meel dhignay waxay su'aal ka keeneysaa habkaas waxayna si dhab ah u weerarayaan arrimaha iyagoo la hadlaya dhammaan daneeyayaasha, laga bilaabo iibka ilaa taageerada, macaamiisha ilaa qolkeenna guddiga. Habkani wuxuu inoo horseedaa xallinta oo ah faa'iido tartan ah iyo la kulan macaamiisheena gaajaysan muuqaalada. Maalin kasta waa dhibaato oo u hawl gal sidii xal loogu heli lahaa. Waa shaqo weyn!
Shakhsigeygii ugu weynaa 'Freakonomics' wuxuu dhacay markaan ka shaqeynayay wargeys ka soo baxa Bariga. Anigu si kastaba uma lihi qof la mid ah sida Mr. Levitt oo kale. si kastaba ha noqotee, waxaan sameynay falanqeyn taas la mid ah waxaanan la nimid xal taas oo meesha ka saareysa murtida caadiga ah ee shirkada. Waqtigaas, waxaan haysannay in ka badan 300 oo qof oo waqti-dhiman ah oo aan lahayn waxtarro iyo inta ugu badan mushaharka ugu yar ama wax uun ka sarreeya. Dhaqdhaqaaqayagu wuxuu ahaa mid cabsi badan. Qof kasta oo shaqaale ah waa inuu u tababaraa qof kale oo shaqaale ah waxayna ku qaadatay dhowr toddobaad inuu ku gaaro heer wax soo saar leh. Waxaan baarnay xogta oo waxaan ogaannay (layaab malahan) inay jirto isku xirnaansho cimri dherer bixinta. Caqabada ayaa ahayd helitaanka 'booska macaan'… oo dadka waawayn siiya mushahar cadaalad ah oo ay dareemeen in lagu ixtiraamo, iyadoo la hubinayo in miisaaniyadaha aan la afuufin.
Falanqeyn badan, waxaan ku ogaanay hadii aan qarash gareyno $ 100k in aan soo ceshan karno $ 200k oo ah qarashyo dheeri ah oo mushahar ah oo dheeraad ah, wareejin, tababar, iwm. dadyahow faraxsanow! Waxaan qorsheynay nidaam mushaar kordhin ah oo labadaba kor u qaaday mushaharkeena bilowga ah iyo sidoo kale magdhaw shaqaale kasta oo ka tirsan waaxda. Waxa jiray shaqaale faro ku tiris ah oo xadiday waxqabadkooda oo aan helin wax intaa ka badan - laakiin waxaan dareemaynay in si cadaalad ah loo bixiyay.
Natiijooyinka ayaa aad uga badnaa intii aan saadaalinay. Waxaan kaydsanay lacag dhan $ 250k dhamaadka sanadka. Xaqiiqdu waxay ahayd in maalgashiga mushaharku uu yeeshay saamayn domino ah oo aynaan saadaalinayn. Waqtiga dheeriga ah ayaa hoos u dhacay sababtoo ah waxsoosaarka oo kordhay, waxaan badbaadinay tan kharashka maamulka iyo waqtiga ah sababtoo ah maareeyayaashu waxay waqti yar ku qaateen shaqaalaynta iyo tababarka iyo waqti dheeri ah oo ay ku maareeyaan, iyo guud ahaan anshaxa shaqaalaha ayaa si weyn kor ugu kacay. Wax soo saarku wuu sii kordhayay halka qarashkeena bini aadamka la dhimay. Banaanka kooxdeena, qof walba madaxa ayuu xoqay.
Waxay ahayd mid ka mid ah guulihii aan ku hanweynaa maxaa yeelay waxaan awooday inaan caawiyo shirkadda iyo shaqaalahaba. Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa runtii ku farxay kooxda maamulka kadib markii isbadalada ay dhaqan galeen. Muddo gaaban, waxaan ahaa Xiddigta Xiddigta Falanqeeyayaasha! Wax yar oo guulo waaweyn ah ayaan ku soo qaatay xirfadayda, laakiin midkoodna ma keenin farxadda kani sameeyey.
Jul 26, 2006 markay ahayd 6:58 AM
Waxaan kaliya dhameeyay Freakonomics naftayda dhowr toddobaad ka hor. Madadaalo u aqriso sida aad uheshay sheekadaada dhabta ah ee dunida Freakonomics.
Jul 27, 2008 markay ahayd 8:21 AM
Waa wax la yaab leh sida qofku u qaadan karo buug aad u faa'iido badan oo xeel dheer oo hadana u adeegsado noloshooda qaab jajab ah
waxay i xasuusinaysaa koorso dhaqaale intro oo aan qaatay hal xagaa
Waxaa jiray haween da 'dhexaad ah oo qaatay koorsada si ay ugu qanciso nafteeda sirdoon la sheegay
Macno malahan mawduuca ay ahayd inay wada lahaato mowduuca nolosheeda iyo sida fiican ee ay iyada iyo qoyskeeda ugu noolaayeen noloshooda dhaqaale iyo maadiba
Jul 27, 2008 markay ahayd 11:30 AM
Aragti xiiso leh. Iskuma dayin inaan ku xoojiyo 'caqligayga' buug. Qofkasta oo i garanaya wuu ogyahay inaan ahay nin caadi ah. Waxaan rajaynayaa inaad is dul taagto oo aad aqriso dhowr qoraal oo dheeri ah kahor intaadan sameyn bayaan gaaban oo aragti gaaban ah.
Hadafka buuggu waa inuu dadka ka dhaadhiciyo inay ka fakaraan wixii ka baxsan caqliga caadiga ah. Tusaalahayga kore wuxuu si fudud u ahaa tusaale lagu xoojiyo fikirka aan caadiga ahayn. Shirkadaha badankood ma rumeysna inaad lacag ku keydin karto adoo lacag badan dadka siinaya - waa wax qurux badan isla markaana shaqadaydu khadka ayay ugu jirtay.
Waan ku faraxsanahay waxa kooxdaydu gaadhay markii aan sidan samaynay waxaanan doonayay inaan la wadaago akhristayaashayda.
Iyo - haa - waan qirayaa inaan ruxmayo.